दिपाश्रीले भनिन् जितुलाई ‘मुर्गा’, तर किन ?दिपाश्रीले किन गरिनन् बिहे ? (हेर्नुस् भिडियो ) « Etajakhabar
दिपाश्रीले भनिन् जितुलाई ‘मुर्गा’, तर किन ?दिपाश्रीले किन गरिनन् बिहे ? (हेर्नुस् भिडियो )
ताजा खबर काठमाडौँ । भदौ २४ अर्थात आज शुक्रबार देखि प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘छक्का पन्जा’बाट हाँस्य अभिनेत्री दिपाश्री निरौला पहिलो पटक निर्देशनमा देखिएकी छिन । पहिलो पटक निर्देशनमा हात हालेकी दिपाले आफु निर्देशनमा आउनु पछाडी फिल्मका पुरुष पात्रहरुको योगदान रहेको बताएकी छिन ।
मल्टीस्टारर फिल्म ‘छक्का पन्जा’मा प्रियंका कार्की, दिपकराज गिरि, जितु नेपाल, केदार घिमिरे, बुद्दी तामाङ, नम्रता सापकोटा, वर्षा राउत लगाएतका कलाकारले अभिनय गरेका छन् । फिल्ममा लगानी समेत गरेका जितु नेपाल फिल्ममा पण्डितको भूमिकामा रहेका छन् । र ती पण्डितर फिल्मकी निर्देशक दिपाश्री निरौलाले रंगखबर संगको रंगवार्तामा गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । वार्तामा उनले जितु नेपाललाई मुर्गा भनेकी छिन् । तर किन ?
तपाईको आजको दिन कस्तो छ ? हेर्नुहोस् असार ११ गते शनिबारको राशिफल
तपाईको आजको दिन कस्तो छ ? हेर्नुहोस् असार १० गते शुक्रबारको राशिफल
लोक दोहोरी गायिका दिलमाया सुनारको पोष्टमार्टम रिर्पोटले खोल्यो यस्ता अपत्यारिला रहस्यहरु, जुन सुनेर तपाई पनि छक्क पर्नुहुनेछ
केहि दिन अघि आफ्नै कोठामा मृत भेटिएकी लोक दोहोरी गायिका दिलमाया सुनारको पोष्टमार्टम रिर्पाेट आएको
सरकारले असार १५ गते धान दिवसका दिन सार्बजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । कर्णाली
हेटौंडा, १४ असार मकवापनुर प्रहरीले अवैध तरिकाले अनलाइन जुवा खेल्ने खेलाउने ११ जनालाई हेटौंडाबाट पक्रेको
काठमाडौ । लामो समयदेखि घाटा ब्यहोरी रहेको नेपाल आयल निगम टाट पल्टिएको छ । भारतबाट
उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ चढेको हेलिकप्टर यसकारण आपतकालीन अवतरण गर्यो
दुर्गा प्रसाईले गर्जिदै भने म गगन थापा भन्दा पहिला प्रधानमन्त्री बनेर देखाउँछु, गगन मलाई हेरेर बस्नेछन् (भिडियो)
अन्तर्वार्ता : निर्वाचन परिणामलाई परिपक्‍वतापूर्वक विश्लेषण गरौँ, लाञ्छना नलगाऔँ – कांग्रेस महामन्त्री शर्मा
काठमाडौँका मेयर बलेन साहको पहिलो अन्तर्वार्ता, गर्दैछन यस्तो बोल्ड निर्णय !